DeLonghi Icona ICMO210.BK Drip Coffee Maker
> Electronics>DeLonghi Icona ICMO210.BK Drip Coffee Maker
Reference ICMO 210.BK
အလွယ်တကူ Coffee နှပ်ပေးနိုင်သော စနစ်ပါဝင်ခြင်း။ အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း။
အလုပ်ချိန် ၇၂နာရီအတွင်း အရောက်ပို့ဆောင်နိုင်မှု
သက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်များအလိုက် ရရှိနိုင်သော အာမခံမှု
De'Longhi's coffee maker ICMJ 210 can make the perfect life for all coffee lovers.This appliance can be used with every ground coffee you prefer.There isaremovable drip tray for easy cleaning.Make your life and your family's life more happier and easier with best coffee everyday.
ကော်ဖီ နှစ်သက်သူတို့၏ ဘ၀ကို ပြီးပြည့်စုံစေရန် De'Longhi မှ ထုတ်လုပ်သော ကော်ဖီစက်များကို ရွေးချယ် အသုံးပြုကြည့်စေချင်ပါသည်။ De'Longhi ၏ ICMO 210 ကော်ဖီစက်သည် ကော်ဖီဖျော်ရာတွင် နှစ်သက်ရာ ကော်ဖီမှုန့်အသုံးပြု၍ လွယ်ကူစွာ ဖျော်နိုင်ပါသည်။ ကော်ဖီ အမှုန့်စစ် ဇကာကို အလွယ်တကူ ဖြုတ်၍ သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် တစ်ကိုယ်ရေသမားဖြစ်စေ၊ မိသားစု ဘ၀တွင်ဖြစ်စေ အချိန်ကုန်သက်သာကာ လူမပင်ပန်းဘဲ နေ့စဉ်ဘ၀ကို အကောင်းဆုံး ကော်ဖီများ သောက်သုံးရင်း ပိုမို စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။
Hair Dryer CHE-188
Hair Dryer CHD-HK1600
Air Cooler CAC-21B
Air Cooler CAC-71
Air Cooler CTF-P53D
Magic Fan CFC-936
Stand Fan Remote CFS-1604R
Stand Fan Remote CFN-ED161
Stand Fan CFN-E163T
Stand Fan CSF-818
Table Fan CFN-HKT12
Table Fan CTF-12
Rice Cooker CRC-JE181
Mini Cooker CMC-E100
Multi Cooker CMC-E381
De'Longhi CTLA 3103. (Red) -2Slice Toaster
De'Longhi CTLA 3103. (White) -2Slice Toaster
DeLonghi Icona Pump ECOV 310.BG Coffee Machine
DELONGHI - ECP 31.21 Pump Espresso Coffee Machine
DeLonghi Brillante ICMJ 210.W Drip Coffee Machine
DeLonghi Double Wall Glass (190ML) ( transparent )
Cappuccino Glass 190ML
DeLonghi Double Wall Glass (220ML) ( Transparent )
Glasses-Latte Macchiato 220ML
DeLonghi Double Wall Glass (60ML)
Espresso Glasses 60ML
DeLonghi EC 270 Coffee Machine ( black )
DeLonghi EC 820.B Coffee Machine